ULondolozo lweeNkcukacha eziBalulekileyo zaseKraken-Funda ukuRhweba
UKraken wenza iNtetha enokwenzeka kuluhlu lweShiba Inu kwiPosi ye-Twitter
Utshintshiselwano olukhulu lwe-cryptocurrency i-Kraken ibhengeze ngesiphatho sayo se-Twitter esisemthethweni izolo malunga nokwenzeka kokudwelisa iShiba Inu (SHIB) kwiqonga layo. Imveliso ekhokelayo kwinkampani, uBrian Hoffman, yathi ukuba i-tweet evela kwi-Kraken handle ifumana ukuthandwa kwe-2K, utshintshiselwano lwe-crypto luya kuluhlu lwe-SHIB. Ngexesha lokushicilela, i-tweet iqokelele i-14.6K retweets kunye ne-54.1K yokuthandwa.
I-Kraken, eyabakho nge-28 kaJulayi 2011, nguJesse Powell, iqhayisa ngokuba neyona mali iphezulu yokurhweba nge-euro kunye nokungabi namali phakathi kwayo nayiphi na enye i-crypto exchange kwihlabathi jikelele. Ngokwewebhusayithi yayo, isiseko somthengi waseKraken sithengisa ngaphezulu kwe-60 ye-asethi yedijithali kunye neemali ezisixhenxe ezifanelekileyo, kubandakanya i-euro (EUR), idola yaseMelika (USD), idola yaseCanada (CAD), iponti yaseBritane (GBP), yen yaseJapan (JPY), yaseSwitzerland. franc (CHF), kunye nedola yase-Australia (AUD).
Utshintshiselwano lwe-crypto luqhayisa ngokufumana ilayisenisi yokuqala yebhanki ye-state-chartered evela kwabasemagunyeni base-US kwaye inabarhwebi abangaphezu kwezigidi ezisi-7 kwihlabathi jikelele.
Ngelixa uKraken engaqinisekisanga umhla woluhlu lweShiba Inu, umsebenzisi we-Twitter ubanga ukuba ufumene ulwazi lwangaphakathi loluhlu namhlanje (ngoLwesibini), wongeza ukuba: "Asinalo ixesha elichanekileyo lokudweliswa kwayo, kodwa kufuneka kubekho uhlaziyo ngomso."
I-Kraken Listing Shiba Inu iNqanaba eliBalulekileyo: uMkhosi we-SHIB
Abaxhasi be-SHIB babona uluhlu lwe-Kraken njengenyathelo elibalulekileyo kunye neprojekthi yokuphendula okuthe tye ekuqinisekiseni. Umxhasi we-SHIB mva nje ubhale kuTwitter esithi: “Iindaba ezibuhlungu ze-SHIB, silindele ukungqubana kwexabiso xa sele ifumaneka ukuze kurhwetywe ngayo apha. U-Kraken mhlawumbi uza kwenza isenti entle ngeentlawulo zotshintshiselwano. "
Okwangoku, i-SHIB Army (abaxhasi bakaShiba Inu kunye nabanomdla) baye babiza uRobinhood ukuba adwelise i-meme coin. Isikhalazo kwiTshintsho.org ukukholisa uRobinhood ukuba adwelise ingqekembe yemali iqokelele iivoti ze-465,846 kwiivoti ze-500,000 (idatha yexesha lokushicilela). Oku kuza phakathi kokuqwalaselwa yi-AMC Theatres ukwamkela i-SHIB ecaleni kwe-Dogecoin kunye nezinye ii-cryptocurrencies zentlawulo.
UShiba Inu uhlala engomnye wabadlali abagqwesileyo kulo nyaka kunye ne-830% rally ngo-Okthobha kuphela, eyanceda ukuba idlule i-Dogecoin njenge-cryptocurrency yesithoba ngobukhulu ngokumalunga noqikelelo.
tags Cryptocurrency, Kraken, iindaba, SHIBA INU
Ijaji lase-US lilahla ityala elichasene ne-Antitrust ngokutyhola i-BCH kunye nabanye abasibhozo kulawulo
Ukuhlaziywa: 2 April 2021
Inkundla yase-US eMiami isilahlile isikhalazo esilungisiwe malunga nabamangalelwa abalithoba, kubandakanya umsunguli we-Kraken u-Jesse Powell, umsunguli weBitcoin.com uRoger Ver, u-Jihan Wu we-Bitmain, kunye nabaphuhlisi abambalwa be-Bitcoin Cash. Umantyi wase-US u-Jaji McAliley usichithile isikhalazo esihlengahlengisiweyo ngokwe-Federal Rule of Civil Procedure nge-Matshi 31.
Kwi-2018, kulandela ukwahlulwa kwenethiwekhi kweBitcoin Cash (BCH) kunye neBitcoin SV (BSV), eFlorida esekwe kwi-blockchain e-United American Corp (UAC) yasungula ityala ngokuchasene namagqala aziwayo e-cryptocurrency kunye nabaphuhlisi ngenxa yezityholo zorhwebo Ndithanda i-Bitcoin Cash. Kwiminyaka emibini emva koko, uJaji uChris McAliley walichitha ityala ngokuchasene nabamangalelwa ngokuchasene nekhethe, evumela i-UAC ukuba ilungise isikhalazo sayo.
Oko kwathethi, inkundla entsha efayilwayo ibonisa ukuba iJaji uMcAliley uliphikile eli tyala. Ijaji yaqaqambisa ezinye zezikhalazo zamagqwetha e-UAC ezimisele ukuphikisana kwaye yaqaphela ukuba izityholo ezicetywayo azibonisi olo lwaphulo-mthetho nangayiphi na indlela.
Izityholo ze-UAC azizukubamba
Ngeli xesha, i-UAC ikwatyhola abatyholwa abalithoba "ngokurhweba ngamabhida", eyindlela yokumisa amaxabiso ethe tyaba, kwaye yongeze ukuba "i-UAC ayenzi ngxoxo yokuba abatyholwa ngotshintsho kunye nabaphuhlisi babandakanyeka kubugqwetha obukhulu, kwaye inkundla ingacinga ukuba akukho namnye . ”
Oko kwathiwa, malunga nokuphulwa kwe-antitrust, isigwebo sikaMcAliley saqaphela ukuba ingxabano yayingenanto. Ijaji yongeze yathi “njengoko bekutshiwo, inkundla iqukumbela ukuba i-UAC ayiphumelelanga ukutyhola izibakala ezibonisa ukuba abatyholwa benze ulwaphulo mthetho. Andizukujongana nokuba i-UAC ityhola ngokwaneleyo ukuba ine-antitrust stand. ”
Ijaji laseMiami lagqiba kwelokuba:
"Ngenxa yezi zizathu zingasentla, inkundla inika [abarhanelwa] isindululo sokudibanisa [isimangalo] sokuqala esenziwe izilungiso phantsi kwe Federal Federal Procedure."
Nangona kunjalo, i-UAC inokuzama ukulandela eli tyala ngokwenza isibheno kwiNkundla yeziBheno yase-US malunga nesekethe yeshumi elinanye kwiintsuku ezingama-30 ezizayo. Nangona kunjalo, umthetho kaMcAliley wagxininisa ukuba “ayizukunceda into ukuvumela i-UAC ukuba iqhubeke nokuzama ukubanga ibango lokuba abatyholwa baphule umthetho weSherman— Ngokufanelekileyo, inkundla iyasichitha isikhalazo ngokukhetha.”
tags BCH, Bitmain, Cryptocurrency, Kraken, iindaba
Umphathi we-Kraken uqikelela ukuba i-Bitcoin isenokuthi ibethe i-100,000 yeedola kwiminyaka emi-2
Ukuhlaziywa: 23 Juni 2020
U-Jesse Powell, u-CEO we-Kraken, uqikelele ukuba ixabiso le-Bitcoin kule minyaka mibini izayo linokubetha i-100,000 yeedola.
Kwelinye ithemba lokujonga ingqekembe yenkosi, i-CEO ye-cryptocurrency exchange yaseCalifornia ithi i-BTC izophula uphawu lwe- $ 100,000 ngokuqhubeka nokunyuka kwayo. Kudliwanondlebe kunye neBloomberg, uyakholelwa ekubeni iFederal Reserve ilwa nokunyuka kwamaxabiso kwiidola zaseMelika ngokwenza ubuqhetseba kwintengiso, iBTC izakusetyenziswa njengothango. Ukholelwa ukuba uluhlu lwamaxabiso e-BTC (ukuya kuthi ga kwi-R10,000 XNUMX) sisaphulelo esikhulu.
Abatyalomali abatsha bakwinto enkulu, ngokukaPowell, kuba uninzi lwabo lubona iBTC njenge "ndawo ekhuselekileyo." Ngaphandle kokungaqiniseki kwe-BTC kunye nengqikelelo enxulunyaniswa nokuphathwa kwexabiso le-crypto, wathi kuyafana nakwiimarike eziqhelekileyo. Uthe,
“Xa uthetha ngobuqhetseba, ukuba ujonga iFed yokuthenga ii-junk bond kwiinkampani zaseMelika ezingaphumelelanga, yinto ehlekisayo leyo. Imakethi iyasetyenziswa. ”
Kungenxa yeso sizathu le nto acinga ukuba, i-BTC inokusetyenziselwa ukuthintela ukunyuka kwamaxabiso. Ngaphambi koko, i-CEO yayenze uqikelelo malunga ne-BTC.
Ngelixa abatyali mali abaliqela beyigqala njengegolide njengendawo ekhuselekileyo, ngenxa yokungazinzi okuphezulu i-BTC ibeke ecaleni. Ngosuku nje olunye ngo-Matshi, ilahlekile ngaphezulu kweepesenti ezingama-50 kodwa yayifumana kwakhona nangaphezulu kwiiveki.
Abahlalutyi bobuchwephesha bavumelana
Ixesha elizayo lokuya kwi- $ 100,000 yeBitcoin inomdla kangangokuba nabahlalutyi bobuchwephesha bayavumelana. Umhlalutyi kwi-Crypto ye-Credible wabelana ngombono nge-29 ka-Meyi nge-tweet yokuba i-bitcoins bezifumana ixesha lokuqokelela ubunzima kwiintsuku ezingama-896 ezidlulileyo kwindlela eya kwi-100,000 yeedola.
Umhlalutyi wabuza abatyali mali be-BTC ukuba bakulungele na njengoko inkqubo yokudityaniswa ibuthathaka kwaye imarike entsha ekhula ngokukhawuleza iyayijoyina, eya kuthi ikhokelele kwimpumelelo yeasethi emva kwe-ATH yangaphambili.
tags Bitcoin (BTC), Bloomberg, UJesse Powell, Kraken
Ukurhweba kwangaphambili ngeZibini zeZibini zemali kwiKraken Crypto Exchange eQalisiweyo
Ukuhlaziywa: 12 Matshi 2020
U-Kraken utshintshiselwano lwemali ye-crypto-currency ibandakanya urhwebo oluqhelekileyo lwe-forex, kwaye oku kwenzeka ukuze uphile ukusukela namhlanje, nge-12 Matshi enezibini ezitsha zemali.
Abasebenzisi kwihlabathi liphela baya kuba nakho ukwenza urhwebo oluthe ngqo phakathi kwe-euro, iidola zaseMelika, iidola zaseCanada, iJapan yen, iphawundi entle, kunye neefranc zaseSwitzerland kwiqonga laseKraken, ngakumbi ngaphandle kwabahlali baseMelika.
Ezona zibini ze-FX zii-EUR / CAD, i-USD / i-CAD, i-USD / i-JPY, i-EUR / i-CHF, i-EUR / i-CHF, i-EUR / i-USD, i-EUR / i-GBP, i-EUR / i-JPY, i-GBP / i-USD. Nceda uqaphele ukuba oku kuyasebenza.
Ukukhokela inyathelo elitsha kwishishini?
I-Kraken yindawo yokuqala yokutshintshiselana nge-crypto ukungena kwimarike ye-forex.
Yahlukile kwinkonzo yayo yokurhweba nge-cryptocurrency, uKraken akaboneleli ngorhwebo kwimarike ye-forex xa kusungulwa. Nangona kunjalo, iseka oko ikuthatha njenge "mveliso ephantsi ye-minima," oko kuthetha ukuba abathengisi bayacelwa ukuba bathengise kuphela iiyunithi ezili-10 zesiseko semali kwintengiselwano nganye.
Amaxabiso aboniswa kumanqaku amahlanu edesimali, ngaphandle kwezibini zeJPY, eziboniswe kumanqaku ama-3.
Utshintshiselwano luchaze intshukumo yalo yokubonelela ngeenkonzo ze-forex njengento eya kuthi ivumele abathengi bayo kwizicwangciso zabo zokurhweba ukuba zisebenze ngakumbi kwaye ziphucukile.
Iziganeko zeNtwasahlobo yowama-2020
Kungekudala, uKraken uqinisekisile iinjongo zakhe zokwandisa iinkonzo kwimakethi yaseIndiya, kulandela isigqibo seNkundla ePhakamileyo esandula ukuguqula imida ekhoyo kwiinkonzo zebhanki kwiinkampani ze-crypto.
Ngaphandle koko, kule nyanga utshintshiselwano luxinene kwimpikiswano apho i-United Kingdom's Financial Conduct Authority (FCA) yathatha inxaxheba.
Umzimba ukhuphe isilumkiso ngokuchasene notshintshiselwano kwiphepha lewebhu, esithi "ibikhathalele ngokukodwa ukujongana neli shishini lingagunyaziswanga," kodwa kwanyanzeleka ukuba isuse isilumkiso ngokukhawuleza emva kokuba kucacile ukuba ukululekwa kwe-FCA kunxulumene Abakhwabanisi abathi babesebenza phantsi kwayo.
tags Utshintshiselwano ngexabiso lemali, Igunya lokuPhathwa kweMali (FCA), Ukuthengiswa kwangaphambili, Kraken